The Ultimate Guide To How To Choose 6 Categories Of Bathroom Ngwa
Home / Foset Guide / The Ultimate Guide To How To Choose 6 Categories Of Bathroom Ngwa
2020 / 10 / 22 nhazi ọkwaFoset Guide 1454 0
N'ime ochicho mma, a na-ekwukarị na "kichin ọlaedo na ime ụlọ ịwụ ọlaọcha", na mgbakwunye na mposi, ụlọ ịsa ahụ, ụlọ ịsa ahụ na ihe ndị ọzọ buru ibu, akụrụngwa ụlọ ịsa ahụ dịkwa ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na ahọrọghị ịsa ahụ nke ọma, ọ ga-ata nchara, gbochie, ma nwee nje. Ọ bụrụ na ahọrọghị ala mmiri, ọ ga-egbochi, azụ, na-esi isi, wdg. Isiokwu a ga-atụle otu esi azụta ngwaike ime ụlọ ịwụ.
1. ịsa ahụ
1. hardwarelọ ịsa ahụ ahọpụtara ahọrọ site na ihe, ọla kọpa chrome ọla kọpa bụ nke kachasị mma, na-esote ya na igwe anaghị agba nchara chrome plating, aluminum alloy chrome plating, iron chromium alloy. (A na-atụ aro ka ị jiri ọla kọpa na ihe mkpuchi chrome maka isi ịsa ahụ, nke na-adịgide adịgide ma mara mma.)
2. E kewara ihe ọla kọpa na ọla kọpa 52, ọla kọpa 55, ọla kọpa 59 na ọla kọpa 62. Kpụrụ mba kwadoro na ọla kọpa nke ihe ndị dị ọcha bụ 59%, ihe ndị na-eduga bụ 1%, ndị ọzọ bụ ihe ndị dị ka zinc, nke a na-akpọ ọla kọpa 59. Ya mere, mgbe ị na-ahọrọ ngwaahịa ịdị ọcha, anyị kwesịrị ịhọrọ ọla kọpa 59 ma ọ bụ ọla kọpa 62, oke ọla kọpa dị ala na nguzogide corrosion agaghị adị mma.
3. Kpee ikpe ma ọ dị mma ma ọ dị njọ site na iji aka gị na-akụ aka, jiri ụda na-ada ụda, dị mma, ma ahọrọla ma ụda ya dull. Mgbe ị na-enyocha mkpuchi elu, ọ dị ọcha na enweghị ntụpọ, enwere ike iji ya dị ka enyo, na-egosi na akwa electroplating dị oke mma. A na-ekewa mkpuchi dị elu n'ime atọ. A na-eji akwa ọla kọpa na ọla kọpa electrolytic kpuchie etiti ahụ, a na-ekpuchi elu nke chrome.
4. Ihu ọnụ gị na ọnụ gị, igwe ojii na-apụ n'anya ngwa ngwa ma doo anya, na-egosi na ọla kọpa ahụ bụ chrome-plated. Ọ bụrụ na ọ jiri nwayọọ nwayọọ pụọ ma ọ bụ nwee akara, ọ bụ igwe anaghị agba nchara.
5. Banyere mmiri ozuzo na-ekpo ọkụ mgbe niile, a na-etinyekarị ndị na-ekpo ọkụ mmiri gas n'ụlọ. Igwe mmiri na-ekpo ọkụ n'onwe ya nwere mmetụta okpomọkụ na-agbanwe agbanwe mgbe niile ma nwee ike ijikwa mmiri dị mma. Ma mgbe ụfọdụ n’ihi mmetụta nke nrụgide mmiri, ma ọ bụ onye na-akwọ aka mgbe ọ na-asa ahụ, wdg, ọnọdụ mmiri ga-adị ọkụ ma jụọ oyi. Isi nke igwe ịsa ahụ thermostatic bụ isi valvụ ya, nke nwere ike ịme njide onwe onye dịka ọnọdụ okpomọkụ dị. Mezie mmiri ọkụ mmiri na-enweghị nsogbu ịmegharị ma gbanwee. N'otu oge ahụ, igwe ịsa ahụ na-ekpo ọkụ nwekwara ọrụ ịgba ọkụ. Ọ bụrụ na agbanwee ihe mgba ọkụ na mmiri ọkụ karịa mmiri a setịpụrụ, ọ ga-ebipụ mmiri na-akpaghị aka. Akwadoro ka ndị agadi na ụmụaka nọ n'ụlọ jiri igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ. (Ebumnuche nke ịhazigharị ọnọdụ okpomọkụ nke mmiri ịsa ahụ thermostatic bụ na ọnọdụ izizi nke igwe na-ekpo ọkụ mmiri dị elu karịa ọnọdụ eserese nke igwe ịsa ahụ thermostatic, ka mmiri mmiri wee nwee ike gbanwee nke ọma.)
6. A na-atụ aro ka ị jiri silica gel nozzles maka ịsa ahụ mmiri. Ọtụtụ mgbe, n'ihi mmetụta nke ịdị mma mmiri, ọ dị mfe ịmepụta ọnụ ọgụgụ na nozzles ruo ogologo oge. N'okwu a, enwere ike iwepụ ọnụ ọgụgụ ahụ n'ụzọ dị mfe site na imetụ aka na-emetụ roba.
7. A na-atụ aro ka ị jiri igwe ịsa ahụ na arụ ọrụ ikuku. Ọrụ ikuku ikuku bụ ịgbanye ikuku na mmiri, nke mere na mmiri ahụ ga-adị nro, ọ ga-enwekwa ahụ iru ala ịsa ahụ.
8. Enwere asambodo cUPC maka ngwaahịa ịdị ọcha, na ngwaahịa ndị a na-asacha na cUPC nwekwara ike igosipụta ezigbo ngwaahịa a. Ya mere, mgbe ịzụrụ ịsa ahụ, ịnwere ike ịlele ma enwere asambodo cUPC, nke bụkwa otu ụkpụrụ maka nyocha mma.
1. Nhọrọ nke ọkpọkọ ọkpọkọ bụ otu ihe ahụ dị ka isi mmiri ịsa ahụ. A na-atụ aro ka ị jiri ọla kọpa na ihe mkpuchi chrome. Isi ọla kọpa nwere ike ịrụ ezigbo ọrụ iji gbochie nchara nchara, a na-ejikwa electroplating chromium na-emeso elu ahụ, ọbụlagodi na ọ ga-eji ya ogologo oge, ọ ga-enwu gbaa dị ka nke ọhụụ mgbe ọ gbasịrị.
2. The valvụ isi n'ime foset ka ọkacha mma mere nke seramiiki ihe, na ezi akara oru, nkịtị na-agba agba mmiri, na-adịghị mfe idowe nje.
3. A na-atụ aro ka ị jiri pọmpụ na-adọpụta adọka, nke dị mma iji rụọ ọrụ.
Atọ, akwa nhicha ahụ
1. Chrome plating na ọla kọpa
A na-ekpuchi oyi akwa nke chromium n’elu ọla kọpa ahụ. Ọgwụgwụ ahụ dị mma. Njirimara anụ ahụ nke chromium na-adịgide adịgide ma na-eguzogide ọgwụ. Mgbe ọtụtụ afọ nke nchacha, ọ ga-abụ otu ihe ahụ dị ọhụrụ. Ihe ọla kọpa na ihe ndị a na-etinye na chrome bụ ihe dị ọnụ ala, na ogo dịkwa oke mma. Ya mere, a na-atụ aro ọla kọpa chrome-plated ihe.
Enwere ike ịme ọtụtụ agba, ụdị na ụdị
3. Ọla kọpa
Ọ nwere ezi nkwụsi ike na oke njupụta. Mgbe electroplating na polishing, o nwere ụfọdụ mgbochi nchara arụmọrụ na-adịghị ịjụ oyi. N'ezie, ọnụahịa ahụ dịtụ elu. Ndị nwe ya nwere mmetụta nke ịdị mma nwere ike ịhọrọ akwa ọla kọpa.
4. Igwe anaghị agba nchara
Obere igwe anaghị agba nchara dị mfe nchara. A na-atụ aro ka ị jiri igwe anaghị agba nchara karịa 304. E nwere ike ịchacha ma kpochaa elu ahụ, jiri ezigbo ederede na arụmọrụ dị elu.
5. Oghere aluminom
Oghere aluminom oghere bụ ịdị arọ, ịdị ike dị mma, nkwụsi ike na-eguzogide, nkwụsị nke corrosion, nkwụsị ọxịdashọn, na arụmọrụ dị mma. A na-atụ aro ya zụta ohere oghere aluminom, nke na-adịgide adịgide.
Mgbe a na-eme ka aluminom dị ọcha, ọ na-eme ka ike sie ike nke ukwuu, ọ naghị ajari, ọ naghị eme ka oxidized na ndị ojii, ma nwee ezigbo nguzogide akwa. Ọ bụ otu ụdị ngwaahịa ndị nwere arụmọrụ dị elu.
1. A na-etinye nkata nkuku n'akụkụ nkuku ime ụlọ ịwụ ahụ, ọ naghị eburu ohere. A na-eji ya etinye ụlọ mposi ma ọ dị mma iji。
2. Site na ihe a, enwere ike kee nkuku nkuku n'ime igwe anaghị agba nchara, iko na plastik. Ebe ọ bụ na nkata nkuku ga-enwe ncha ntutu, ihe mkpuchi, gel ịsa ahụ, ncha, iko ezé na ihe ndị ọzọ, enwere ọtụtụ ihe na ibu anaghị adị ọkụ, ya mere a na-atụ aro ka ị jiri nkata nkata igwe anaghị agba nchara abụọ mee ka ọ dị mfe nhicha ma kwụsie ike Ọdịdị Good, ike amị ikike.
Ise, valvụ akuku
Ọ bụ ezie na valvụ nkuku bụ obere ihe, elegharala mkpa ọ anya. Akara valvụ nke adịghị mma nwere ike ịdapụ mmiri na mgbapụta ọkpọkọ.
1. N'ihe banyere ihe onwunwe, ihe ọla kọpa nwere nguzogide corrosion ka mma. Ọ kachasị mma ịghara iji ihe alloy mee. Alloy ihe dị mfe corrode na nchara, nke ga-eme ka mmiri pụọ. Dochie ya mgbe nchara nchara, ọ dị mfe ịbanye n'ime mmiri na-enweta ọdụ ụgbọ mmiri, nke na-eweta nsogbu dị ukwuu iji dochie anya.
2. Na ọkpụrụkpụ mgbidi ọkpụrụkpụ nke n'akuku valvụ, mma ya mgbawa na-àmà na mkpakọ iguzogide. Mgbidi mgbidi nke ezigbo nkuku valvụ ruru 3.4mm. Ya na okpukpu abụọ nke otu mkpụrụ ego yuan hà.
3. Igwe akwa electroplating dị elu nwekwara ike hụ na nkwụsị nke corrosion. A na-ekewa mkpuchi dị elu n'ime okpukpu atọ, ala ala bụ nickel-plated, etiti ahụ na-eji ọla kọpa acid na ọla kọpa electrolytic, a na-ekpuchi elu ya na chrome. Elu nke mkpuchi ahụ dị larịị dị ka enyo, na-enweghị ntụpọ.
Isii, ala mmiri
Mgbapu ala bụ ihe dị mkpa dị n’etiti ọkpọkọ mmiri na ala ime ụlọ, na ihe dị mkpa drainage. Omume ya na-ekpebi ọfụma nke drainage, ma nwee ọrụ nke igbochi isi, ahụhụ, clogging, germs, na backflow. Ọ bụrụ na ahọpụtaghị ala ala nke ọma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka edochi ya, ọ dị mfe imebi oyi akwa mmiri na mmiri seepage nwere ike ime. Na-ebute ihe egwu zoro ezo nke mmiri mmiri, yabụ ị kwesịrị ịzụta ezigbo ala mmiri iji zere nsogbu.
1. Mmiri na-ekpuchi ala mmiri
A na-akpọkwa mmiri na-ekpuchi mmiri na-agbanye ala U-shaped floor. Ọ dabere na mmiri dị n'ime oghere nchekwa mmiri iji wepụta isi. Ogbu mmiri ga-akarịrị 50mm iji nwee nrụgide akàra zuru ezu iji gbochie ísì ahụ ịlaghachi. Ya mere, omimi nke ala mmiri kpochiri mmiri dị omimi, ọ na-eguzogide nsị mmiri buru ibu, ọ dịkwa mfe itinye sludge na ntutu na ọkpọkọ U, na-akpata mkpọchi. Nsogbu ọzọ bụ na mgbe mmiri echekwara na ala drain na-ekpochapụ, ọ bụrụ na enweghị mmiri ọ bụla na-asọgharị ọzọ, mmetụta deodorization ga-emetụta n'ihi ezughi oke mmiri nchekwa. N'otu oge ahụ, ala mmiri na-ekpuchi mmiri enweghị usoro nkewapụ onwe ya na nhazi ahụ, yabụ na ọ nweghị ike ịrụ ọrụ nke igbochi njupụta na ụmụ ahụhụ. .
2. oghere cylinder ụdị n'ibu akara n'ala igbapu
A na-akpọkwa ụdị udiri ala a nke okpukpu ala T, nke na-ekpochapu ala, na nke dị n'akụkụ ala. A na-emeghe ikele ala site na ike ndọda nke mmiri mgbe ị na-agbapụ, mmiri ala ga-emechi akpaghị aka mgbe mmiri gachara. Kinddị ala mmiri a nwere ike igbochi ụmụ ahụhụ nke ọma, mana n'ozuzu ụdị ala a ga-eji mmiri, mmiri ga-agbaji mgbe ogologo oge gasịrị, na nrụgide akara ezughị iji gbochie ísì ahụ.
3. Ike nchekwa liner ụdị n'ibu akara n'ala igbapu
Kinddị okpukpu ala a na-emeri ntụpọ nke ụdị ala abụọ dị n'elu. A na-agbakwunye tankị dị n’ime ime ala nke ala ahụ, a na-agbanyekwa mmiri dị n’ime ya na mmiri n’ime ala ala, a na-emepe oghere nke ala site na ike ndọda nke tank dị n’ime. Kinddị okpukpu ala a nwere ike imeghe mgbe niile, nnukwu mwepụ na arụmọrụ magburu onwe ya.
Na nchịkọta, anyị nwere ike ikpebi arụmọrụ nke ngwaike site na ngwongwo ya na nhazi ya. Zụta ezigbo ngwaike nwere ike ịchekwa ọtụtụ nsogbu ma emechaa.
Nke gara aga :: Gịnị mere e ji nwee nnukwu ọdịiche dị n'etiti pọmpụ $ 30 na $ 300? Osote: Kedu ụdị akụrụngwa ụlọ ịsa ahụ dị mma?